Hay�adda DDG oo hakisay howlihii ay ka waday Gaalkacyo Nairobi 07 Dec, 2011Hay’adda Minosaarista Denishka ee DDG ayaa waxa ay si rasmi ah shaaca uga qaaday inay hakisay howlihii samatabixinta miinooyinka iyo walxaqarxa ee ay ka waday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ilaa ogaysiin dambe. Hay’addaasi ayaa waxaa ay si nabdoon uga bixisay deeganadaas boqolaal walxa qarxa ah tan iyo intii ay hirgelisay xafiiskeeda koonfurta Gaalkacyo sanadii 2009kii. Laga soo bilaabo 25 Oktoobar 2011, shaqada DDG ee gudaha iyo hareeraha Gaalkayo waxaa ku yimid isbadel baaxad leh, xiligaas oo labo qof oo u shaqaynayay hay'addaas, laguna kala magacaabo Poul Hagen Thisted iyo Jessica Buchanan ay koox hubaysan ka afduubeen gudaha koonfurta Galkacyo . Poul Hagen Thisted waa nin da’ ah oo 60 sano jir ah, iyadoo Jessica Buchanan ay tahay gabar 32 jir ah.
Warsaxaafadeed ay soo saartay DDG ayaa lagu sheegay “ DDG waxaa lagu qasbay inay qaadato go’aan adag oo lagu joojinayo dhamaan hawlgalkii miinooyinka iyo walxaha qarxa maadama ay tahay xaalada goobta mid aan amaan u ahayn shaqaaleheeda samafalka, haddii ay Soomaali amaba ajaanib yihiin labaduba. Sida ay sheegtay DDG xiritaanka xafiiska ayaa waxa uu yimid xili DDG iyo Danish Refugee Council ay qorsheenayeen inay balaariyaan hawlaha ay ka hayeen goobahaas. Hay’adda Danish Refugee Council iyo qeybteeda howlaha miinadu ayaa waxa ay sheegayaan in ay sii wadi doonaan dadaalada ay ku gargaarayeen bulshada Soomaaliyeed ee la dariska ah khatarta waxyaabaha qarxa ee ka haray dagaalada, kuna baahsan dhamaan dalka.
Hay’adda DDG waxay ay bilawday hawlaheeda wax ka qabashada miinooyinka sanadii 1999kii gudaha Somaliland, iyadoona 2007kii xafiis kale ka furatay magaalada Muqdisho. Laga soo bilaabo sanadii 2009 hawlgalka la tacaalida miinooyinka ayaa waxa ay hay’addaasi ay ka waday xafiiskeeda koonfurta Galkacyo laakiinse xafiisyada Somaliland,Puntland iyo Mogadishu ayaa si caadi ah u sii wadan doona hawlgalkoodii Mohamed Garane